Zavatra tokony hialana amin'ny famolavolana rehefa mametraka lahatsoratra | Famoronana an-tserasera
Zavatra tokony hialana amin'ny endrika rehefa miasa miaraka amin'ny lahatsoratra
Paul gondar | | Graphic Design
Zavatra tokony hialana amin'ny endrika rehefa mandahatra lahatsoratra hahatonga ny lahatsoratray hovakin'ny mpampiasa ary hiasa tsara. Ny lahatsoratra amin'ny endrika dia singa fototra izay tsy maintsy tsaboina tsara raha tiantsika ny hahatratra ny mpampiasa mazava tsara ny hafatra, izany no antony tsy maintsy hananantsika antoka fa mandeha tsara ny lahatsoratra.
Ny lahatsoratra tsirairay dia tsy mitovy arakaraka ny endriny fa ny fitsipika fototra ho an'ny lahatsoratra rehetra dia ny fahazoana ny fampahalalana hahatratra ny mpampiasa. dia tsy maintsy ialao ny enta-mavesatra tsy ilaina izay tsy manampy na inona na inona amin'ny volavolainay ary manahirana ny famakiana ilay lahatsoratra. Amin'ity lahatsoratra ity dia hahita hevitra fototra vitsivitsy momba ny zavatra tsy tokony hatao isika rehefa miasa miaraka amina lahatsoratra amina endrika iray.
1 Mampiasà endritsoratra tsy voavaky
2 Mifanohitra tsara eo amin'ny mombamomba sy ny lahatsoratra
3 Mampiasà endritsoratra maro
4 Vokany izay tsy manampy na inona na inona amin'ny lahatsoratra
5 Loko tena voky
6 Mampiasa loko be loatra
7 Aza manangana ambaratonga ambony
8 Famoronana tsy fahita firy ao amin'ilay lahatsoratra
Mampiasà endritsoratra tsy voavaky
Rehefa miasa miaraka amina lahatsoratra ny zavatra voalohany tokony hataontsika Ny mahatratra dia ny famakiana ny lahatsoratra, Tsy misy ilana azy raha manintona tokoa ny lahatsoratray amin'ny sehatra hita maso raha toa ka ratsy ny famakiana azy avy eo. Ny typography marina dia miankina amin'ny famolavolanaNy layout amin'ny boky dia tsy mitovy amin'ny fisehon'ny afisy, samy hafa izy roa ary mitaky fiheverana bebe kokoa avy amin'ny mpampiasa. Raha miasa miaraka amina lahatsoratra lava iray isika, ny tena mety dia azo zahana tsara manamora ny famakiana. Raha lohateny ny lahatsoratray dia afaka milalao karazana endritsoratra hafa isika fa mieritreritra a mahay mamaky teny tsara. dia tsy maintsy ialao ireo endritsoratra calligraphic rehetra ireo tena tsara tarehy io fa tena sarotra vakiana.
Mifanohitra tsara eo amin'ny mombamomba sy ny lahatsoratra
Isaky ny miasa amin'ny lahatsoratra isika dia tsy maintsy mahatratra a mifanohitra tsara eo amin'ny mombamomba sy ny lahatsoratra for mampitombo ny famakiana, ny lesoka mahazatra indrindra dia ny fampiasana loko ambadika mitovy amin'ny an'ny lahatsoratra. Raha mijery ny lahatsoratry ny boky isika, dia hitantsika fa fotsy ny taratasy ary mainty ny soratra mba hahavaky azy tsara, raha tsy mainty no nampiasantsika loko dia vao mainka hiharatsy ny famakiana ary hanasatra ny masontsika izany. Tokony hataontsika jereo ny soratra toy ny hoe famantarana ny fifamoivoizana, dia tokony hisarika ny saintsika mba hijerentsika azy sy hahafantarantsika fa misy azy io.
Mampiasà endritsoratra maro
Tena mahazatra ny mahita volavola misy endritsoratra an'arivony samihafa mieritreritra fa mahavita vokatra tsara kokoa ity, ny marina dia izao vao maika manaratsy azy ny zava-drehetra. Rehefa miasa miaraka amina lahatsoratra iray isika, dia atolotra mampiasa endri-tsoratra roa farafahakeliny ary milalao amin'ny fomban'izy ireo (sahy, mahazatra ... sns) mba hamoronana fifanoherana samihafa amin'ny lahatsoratra. Raha mamorona tetikasa fanontana toa ny magazine isika ary te hanampy lohateny sy dikanteny amin'ny volavolanay, dia soso-kevitra mampiasa typeface mitovy nefa manana habe roa samy hafa. Ny lakilen'ny famolavolana tsara dia ny fahatratrarana ny firindrana izay miasa fa tsy ny pastiche an'ny singa izay tsy mahatratra na inona na inona.
Vokany izay tsy manampy na inona na inona amin'ny lahatsoratra
Tsy maintsy to avoid isaky ny afaka mampiasa ireo rehetra ireo isika vokatra izay ampiana amin'ny typeface izay tsy manampy na inona na inona handefa hafatra fotsiny ataovy sarotra ny mamaky. Ny vokany dia azo ampiasaina raha misy antony, na noho ny lohahevitry ny endrika na noho ny antony mifandraika amin'ny fomba. Aza apetraka amin'ny soratra ny vokany isaky ny afaka sy milalao karazana fifanoherana hafa ianao mahazo ambaratongam-pahefana tsara kokoa.
Loko tena voky
Rehefa mamolavola amin'ny lahatsoratra isika dia tsy maintsy fadio ny mampiasa loko tena tototry ny ao ambadika sy ny lahatsoratra, ny fampiasana ireo loko ireo afaka mandreraka ny masonao rehefa lava ny famakiana. Soso-kevitra izany mampiasa loko manjelatra ambany ho an'ny lahatsoratra lava. Azontsika ampiasaina amin'ny lahatsoratra kely ireo loko ireo izay tsy mila famakiana lava be.
Mampiasa loko be loatra
Tsy soso-kevitra izany avadiho ho lasa piñata maro loko ny lahatsoratray feno loko an'arivony, ny idealy dia mampiasa loko tokana ary raha mangataka antsika ny volavolan-tsika hanisy iray amin'ny fomba an-tsokosoko hanasongadinana antsipiriany sasany. Rehefa miasa miaraka amina endrika ianao dia apetraho amin'ny tenanao ity fanontaniana manaraka ity: Maninona no mampiasa loko maro kokoa? Misy antony ve ny loko?, amin'ny fampiasana loko maro no hany zavatra hahatratrarana dia ny fanapahana ny ambaratongam-pahefana ary hahatonga ny mpampiasa mamaky an'io lahatsoratra io ho adala. Ny loko dia mety ho loharano mifanentana tsara hilazana amin'ny mpampiasa fa zava-dehibe kokoa noho ny ambiny ity lahatsoratra ity, raha mampiasa loko maro ianao dia very io hevitra io ...
Aza manangana ambaratonga ambony
Ny lahatsoratra tsirairay amin'ny famolavolana dia manana ambaratonga hafa manan-danja, izany no antony tsy maintsy ataontsika farito tsara ny ambaratongam-pahefana ny atiny amin'ny alàlan'ny fampiharana karazana fahasamihafana. Ny hadisoana mahazatra be loatra izay atao rehefa miasa miaraka amina lahatsoratra dia tsy mamaritra ny maha-zava-dehibe ny lahatsoratra tsirairay, tsy maintsy fariparintsika hoe iza avy ireo ampahany manan-danja indrindra amin'ny lahatsoratray hampihatra ny mifanohitra amin'izay. Ny lohateny dia ho lehibe kokoa noho ny lohateny ambany, toy izany ihany koa ny amin'ny lahatsoratra lava sy ny antsipiriany tianay hasongadina, toy ny teny nalaina. Afaka mampiasa mifanohitra isika vatana (sahy) habe, loko ... sns.
Famoronana tsy fahita firy ao amin'ilay lahatsoratra
Imbetsaka ny famoronana no manafika antsika ary mamorona "làlambe" izahay miaraka amin'ny lahatsoratry ny volavolainay mamorona tononkalo tsy fahita firy izay tena sarotra vakina. Mila mieritreritra lojika isika rehefa miasa amin'ny lahatsoratra iray ary manontany tena amin'ny andiana fanontaniana: Vakiana tsara ve? azo ve izany? Manam-potoana hamakiana azy ve ianao? Ny lahatsoratra amin'ny takelaka fanaovana bileta dia tsy mitovy amin'ny an'ny magazina, ny voalohany dia tokony ho vakiana haingana raha toa ka miadana kokoa ny famakiana azy. Mitadiava antony foana hamoronana firaketana famoronana bebe kokoa miaraka amina lahatsoratra.
Ny miasa miaraka amin'ny lahatsoratra dia zavatra mitaky fotoana sy antsipiriany betsaka, lahatsoratra tsara dia saro-pantarina nefa manaitra, lahatsoratra tsara mitaona ny saintsika amin'ny bitsibitsika fa tsy amin'ny kiakiaka. Rehefa miasa miaraka amina lahatsoratra ianao dia tena ampirisihina mafy ianao hanao fandalinana kely any an-tsaha izay ahitanao ny maro andinin-tsoratra masina (magazine, boky ... sns) hanome aingam-panahy anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Zavatra tokony hialana amin'ny endrika rehefa miasa miaraka amin'ny lahatsoratra
Javier Mariscal, ray mpamorona an'i Cobi, mascot an'ny Lalao Olaimpika